TLEE Spas waxay soo bandhigaysaa mashruucii ugu dambeeyay: Willowbrook Spa ee The Lake House ee Canandaigua
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » TLEE Spas waxay soo bandhigaysaa mashruucii ugu dambeeyay: Willowbrook Spa ee The Lake House ee Canandaigua
Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirarka • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Willowbrook Spa ee The Lake House ee Canandaigua
TLEE Spas, oo ah shirkad horumarin isboorti oo caalami ah oo la aqoonsan yahay oo leh naqshad naqshad leh, qaab soo dhoweyn leh, ayaa lagu sharfay inay soo bandhigto Willowbrook Spa, oo dhowaan lagu soo bandhigay The Lake House oo ku taal Canandaigua, oo ah hoteel naqshadeyn leh oo hoteelku dhiirrigeliyay Gobolka harooyinka ee New York. Meesha fayo-qabka cusubi waxay dhiirigelin ka qaadaysaa goobteeda caanka ah ee harada iyo quruxda aan la sifeynin ee Harooyinka Farta, oo caan ku ah kaararka boosta u qalma ee harooyinka iyo buuraha duudduuban iyo sida gobolka beeraha oo hodan ku ah taariikhda maxalliga ah.
Meesha fayoobaanta cusub ayaa soo celisa oo ku dhiirrigelisa saunas creekside iyo daaweyn la beddeli karo.
The Lake House waxay kasbatay aqoonsi Condé Nast Traveler's Hot List 2021 oo ka mid ah kuwa cusub ee ugu wanaagsan: huteelada adduunka, huteelada waara ee adduunka, hoteelada ku yaal Mareykanka iyo Kanada, iyo huteelada dabeecadda ee adduunka.
Willowbrook Spa waxay ku dhammaystirtaa hudheelka hudheelka iyada oo si toos ah loo galayo beerta cawska leh, xeebta xasilloon, iyo daaweynta.
Markii The Lake House la furay xagaagii la soo dhaafay, intii lagu jiray masiibada COVID-19, ku noqoshada socdaalka gobolka iyo dalxiis gaabis ah ayaa abuurtay buuq weyn oo ku aaddan hantida, halkaas oo meelaha gudaha iyo dibaddaba ay si dabiici ah isku dhex galaan oo abuuraan muuqaal qurux badan oo xusuusta nolosha oo dhan ah. Dhawaan ayaa lagu soo bandhigay Safarka + Liiska Liiskeeda 2021, xulashada hoteelada cusub ee ugu fiican adduunka, The Lake House ayaa sidoo kale aqoonsi ka heshay Condé Nast Traveler's Hot List 2021 oo ka mid ah hoteelada cusub ee ugu wanaagsan adduunka, kan ugu wanaagsan waarta hudheelada adduunka, huteelada cusub ee ugu fiican Maraykanka iyo Kanada, iyo huteelada dabeecadda cusub ee ugu fiican adduunka oo dhan. Willowbrook Spa oo soo dejisa bay'ada dabiiciga ah ee soojiidashada leh, waxay dhammaystirtaa hudheelka hudheelka leh ee raaxada leh oo si toos ah loogu galayo beerta cawska leh iyo xeebta xasilloon, iyo daaweynta loogu talagalay ujeeddooyinka fayoobaanta martida.
"Willowbrook Spa waxay dib ugu laabanaysaa jiritaan la mid ah oo u dabbaaldegaya isku xirnaanta aadanaha, xawaaraha nolosha oo gaabis ah, iyo waaya -aragnimada bannaanka," ayuu yiri Lee. "Waxaan ka faa'iideysaneynaa falsafadda hoose ee dhulka iyo isku xirnaanta adduunka dabiiciga ah iyada oo loo marayo naqshadeynta is-qurxinta, alaabada wax-ku-oolka ah ee saafiga ah, iyo adeegyada natiijooyinka horseeda."
Isku -darka saamaynta - oo ay ku jiraan hab -nololeedka waddanka khamriga iyo farshaxanka cunnada - Willowbrook Spa waa il dabiici ah oo lagu helo fayoobaanta qaabab badan, laga soo bilaabo dhaqdhaqaaq maanka ku haya hareeraha deggan si loo daweeyo dibedda iyo dib -u -noqoshada dhammaadka wiigga. Maaddaama gobolka Faraha Harooyinka sidoo kale loo yaqaan gobolka khamriga ugu horreeya ee Xeebta Bari ee Mareykanka, TLEE Spas waxay eegtay aag ay si fiican u taqaan, waddanka khamriga ee California, iyo waxyaabo la isku daray oo gacan ka geystay qeexidda qaab nololeedkaas gaarka ah ee waayo -aragnimada isboortiga cusub. Qolka Qoraxdu waa jawi qol-qol oo leh astaamo badan oo iftiin dabiici ah, hawo cusub, iyo aragtiyo dhiirrigelin leh oo ku wajahan Beerta Spa, oo ay ku jiraan saddex baakad oo saunaview oo khaas ah oo leh qubeysyo bannaanka ah iyo aagag nasasho oo sameeya is-qabsi al-fresco shakhsiyaadka, lammaaneyaasha ama kooxaha yaryar. Dhulka ku hareereysan, ikhtiyaarrada fadhiga ee badan waxay fidiyaan waayo -aragnimada qolka fadhiga ee bannaanka weyn, iyagoo siinaya goob dhiirran oo lagu fikiro ama jameeco bulsho oo ammaan ah.
Waxaa dhiirrigeliyay dhaxalka beeraha hodanka ah ee gobolka, kaas oo horseeday dib-u-soo-nooleynta beeraha ee maaddooyinka cunnada ee heer caalami ah iyo dib-u-soo-nooleynta daawaynta daaweynta dabiiciga ah, Willowbrook Spa waxay u isticmaashaa daawada dhirta si kor loogu qaado caafimaadka guud waxaana ka mid ah bixinta qurxinta sare u qaadista si kor loogu qaado khibradda martida. Si ulakac ah u fudud oo si taxaddar leh loo daaweeyey, menu-ka spa wuxuu bixiyaa waayo-aragnimo hal-nooc ah, oo ay ku jiraan daaweynta daryeelka maqaarka ee fadhiga ku saleysan iyo duugista saxiixa hantida oo bixiya laba isugeyn farsamooyin qoro oo leh saliidaha geedaha lagu darsaday iyo daawooyinka la mariyo daaweeye. Iyada oo la adeegsanayo adeegyo kaladuwan oo si isku mid ah u soo jiidan kara kuwa cusub iyo kuwa u dhinta-si isku mid ah, Willowbrook Spa waxay ku martiqaadeysaa martida inay sare u qaadaan qaab nololeedkooda fayoobaanta ah iyagoo hoos u dhigaya, dib-u-kicinaya, iyo dib-u-buuxinta xeebta sare ee harada Canandaigua xagaaga iyo dayrta.
Ka sokow Willowbrook Spa, TLEE Spas ayaa dhowaan u diyaarisay barnaamij loogu talagalay The Seawater Spa oo ku taal Gurney's flagship Montauk Resort, oo loo qorsheeyay in la furo dabayaaqada 2021 dhamaadka bari ee Long Island. TLEE Spas waxay diiradda saartay in lagu xidho qaabka fayoobaanta ceelasha biyaha badda ee gaarka ah iyo meesha ugu horreysa ee badweynta, halkaas oo sifooyinka bogsashada dabiiciga ah ee biyaha hodanka ku ah macdanta iyo hawada cusbada la geliyay ay marayaan marxaladda dhexe. Willowbrook Spa oo ku taal The Lake House iyo The Seawater Spa ee Gurney's Montauk ayaa kaalin muhiim ah ka qaadan doona sare u qaadidda waayo -aragnimada fayoobaanta ee harooyinka u dhow iyo guryaha badweynta, iyagoo ku martiqaadaya martida inay xiriir la yeeshaan dabeecadda gudaha bay'adaha fayoobaanta cusub ee qaabeeya sifooyinka goobta gaarka ah iyo macnaha deegaanka .
Ku saabsan TLEE Spas
TLEE Spas waxay keentaa heer aan la barbardhigi karin oo ah xamaasad, xirfad -yaqaannimo iyo la -qabsi si loo abuuro isbaarada gaarka ah iyo waayo -aragnimada fayoobaanta. Waxay ku wajahan yihiin mashruuc kasta indho cusub, iyagoo raadinaya siyaabo kor loogu qaado oo loo kala sooco, oo leh rikoor la xaqiijiyey oo ah guusha iyada oo loo marayo ururinta mashaariicda abaalmarinta leh, macaamiisha garashada leh iyo sumadaha hogaaminaya. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan TLEE Spas, booqo www.tleespas.com .